Talooyin ku saabsan diyaarinta qol loogu talagalay martida | Bezzia
Talooyinka diyaarinta qol loogu talagalay martida
Maria vazquez | | Guriga
qolalka martida ku dhawaad ​​waligood hal hawl kama qabtaan guryaheena. Waxay inta badan noqdaan qolka shaqada ama lagu kaydiyo waxyaalaha aan meelna ka haysan qolalka kale. Diyaarinta qol loogu talagalay martida leh sifooyinkan waxay noqon kartaa mid aad u dadaal badan, laakiin talooyinka aan la wadaagno maanta waxaan kuu xaqiijineynaa in wax faahfaahin ah aysan ka maqnaan doonin.
Dhammaanteen waxaan rabnaa martida ku dareemo raaxo guriga. Sababtoo ah ma haysanno qol noo gaar ah iyaga, macnaheedu maaha in aanay sidaas noqon karin. Waa ku filan tahay in la nadiifiyo qolka oo lagu daro faahfaahin yar yar si ay u dareemaan inay guriga joogaan.
1 qolka nadiifi
2 si nadiif ah uga tag
3 Diyaarso gogosha
4 Ku dar faahfaahin miiska dushiisa
5 Ha ilaawin tuwaalada
Qolalka martida ee aan sida badan loo isticmaalin waxay u muuqdaan inay noqdaan meel bakhaar oo kale oo guriga ah. Kuwa aan u isticmaalno ujeedo labaad, waa macquul inay ka kooban yihiin dhammaan agabyada lagama maarmaanka u ah fulinta hawshan. Labada xaaladoodba, tallaabada ugu horreysa waxay noqon doontaa qolka nadiifi.
Ma inaan wada saaraa? Halkee baan dhigaa? Sariirta hoosteeda? Xitaa haddii aadan rumaysan, waxay noqon kartaa xal wanaagsan. ku bilow hab u dhig armaajooyinka qolka, oo meel yar oo madhan ah u ilaalinaya martida si ay u soo laadlaadsadaan ama u habeeyaan dharkooda. Sidoo kale nadiifi dusha sare adigoo ka tagaya kaliya waxyaabaha muhiimka ah oo ku kaydi inta soo hartay sanduuqyada. Dooro sanduuqyo muuqaal ah oo la isku duway oo quruxsan oo si fiican u eegaya meel kasta oo aad ku dhejiso. Inta aad awooddo geli armaajooyinka, ku qari sariirta hoosteeda ama u qaad qolal kale.
si nadiif ah uga tag
Galitaanka qolka iyo urinta nadiifka ah waa dareen aan dhammaanteen jecelnahay. Sidoo kale ma rabno inaad ku waasho martida. Kaliya samee waxa aad caadiyan sameyso: dulmar sagxadaha, nadiifi dusha sare adigoo fiiro gaar ah u leh muraayadaha iyo hawo ka bixi ka hor inta aanay iman.
Haddii gogosha ay kaydsan tahay wakhti dheer, waxay ku habboon tahay inaad dhaqdo oo aad feerto ka hor intaadan sariiraha samayn. Sidoo kale diyaari qaar bustayaal dhumucyo kala duwan oo ku xiran wakhtiga sanadka; Hadday jiilaal tahay, buste qaro weyn ku hay qolka armaajooyinka, haddii ay xagaa tahayna, ku kala fidso sariirta sariirta sariirta sariirta, taas oo ay sidoo kale isticmaali karaan marka ay qaboojiso si ay uga baxaan balakoonka ama barafka.
Qaarkeen waa ka qabow badan yihiin kuwa kale waxaana laga yaabaa inaan u baahno dhar dheeraad ah si aan u kululeyno habeenkii, gaar ahaan haddii aan la qabsan cimiladaas. Markaad qolka geyso, ha ilaawin inaad u sheegto meesha aad uga tagtay haddii aadan ku dhex samayn qolka armaajooyinka. si aanay u waydiin.
Ku dar faahfaahin miiska dushiisa
Marka lagu daro laambadda sida caadiga ah miiska u fadhiisata, waxaa jira tafaasiil aad ku dari karto martidaaduna way qadarin doonaan. Koob iyo dhalo biyo ah Waxay ka ilaalinayaan inay kacaan haddii ay harraadsan yihiin habeenkii. Buug ama joornaal ayaa siin doona madadaalo haddii ay rabaan inay ku nastaan ​​qolka. Iyo bouquet ubaxyo cusub ah… bouquet ubax cusub ayaa had iyo jeer dhahaya soo dhawoow!
Ha ilaawin tuwaalada
Sida marka aan nimid hoteel, dhammaanteen waxaan jecelnahay inaan helno tuwaalada qalafsan qaarkood si aad u qubeysato safar dheer ka dib. Haddii ay doonayaan in ay la wadaagaan musqul qoyska, fikradda waa in lagu tago qolka iyaga oo la socda gogosha cagta iyo saabuun adag ama jel dareere ah oo ay isku nadiifin karaan. Haddii ay rabaan in ay u yeelaan musqul iyaga kaliya, waxaad u habeyn kartaa alaabtan musqusha lafteeda.
Waxa kale oo aad u taqaan martidaada si ka fiican qof kasta, markaa haddii aad ogtahay waxa ay jeclaan karaan, ka faa'iidayso si aad ula yaabto! Oo waxaan ku celinaynaa, ka walwalsan faahfaahinta marka diyaarinta qolka martida, laakiin ha waalan. Martida waxaanu jecelnahay in aanu dareenno in ay ka walaacsan yihiin in aanu caafimaad qabno laakiin aanu dareemayn culays.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Talooyinka diyaarinta qol loogu talagalay martida
William Levy wuxuu leeyahay mashruuc cusub: 'Monte Cristo'